तपाइँ कसरी टेलिग्राम बाट नि: शुल्क श्रृंखला डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ मोबाइल फोरम
तपाइँ कसरी टेलीग्राम बाट मुक्त श्रृंखला डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ
क्रिस्टियन गार्सिया | 14/10/2021 09:00 | तार
विडम्बना पर्याप्त, तपाइँलाई थाहा हुन सक्छ वा भनिएको छ कि टेलीग्राम बाट तपाइँ धेरै भन्दा धेरै कुरा गर्न वा gifs बनाउन सक्नुहुन्छ। र तेसैले यो हो, किनकि धेरै प्रयोगकर्ताहरु बिभिन्न च्यानलहरुमा प्रवेश गर्दछन् जसमा उनीहरु सबै प्रकार को सामग्री पोस्ट गर्दछन् जुन तपाइँ को लागी उपयोगी हुन सक्छ। त्यो हो जहाँ हामी यो प्रश्न पाउँछौं कि म कसरी टेलीग्राम बाट नि: शुल्क श्रृंखला डाउनलोड गर्न सक्छु, किन शब्दहरु लाई एकसाथ राख्छु टेलीग्राम श्रृंखला र डाउनलोड एक priori पागल लाग्छ, तर हो, त्यहाँ यस्तै केहि छ र हामी तपाइँलाई यो कसरी गर्ने भनेर बताउन जाँदैछौं।
तेसैले अगाडिको बिना त्यहाँ टेलीग्राम बाट फिल्महरु वा श्रृंखला को रूप मा मल्टीमीडिया सामग्री डाउनलोड गर्न को लागी धेरै तरिकाहरु छन् र यो सबै स्वचालित बट्स को लागी कि अनुप्रयोग बिभिन्न च्यानलहरुमा छ धन्यवाद। निस्सन्देह, धेरै कानूनी यो हो कि छैन, त्यसैले छैन यो तपाइँ मा निर्भर छ कि यो विधि को उपयोग गर्न को लागी। यी सबै बट्स केहि सामग्री को लागी खोज्न को लागी प्रयोग गरीन्छ कि हामी सार्वजनिक च्यानलहरुमा चाहन्छौं र ती धेरै उपयोगी हुन सक्छन्। वास्तव मा, यदि यो उपयोगी र सजीलो छ कि तपाइँ कुनै बाहिरी अनुप्रयोग वा टेलीग्राम को बाहेक केहि पनी आवश्यकता छैन हेर्नुहोस्। तर यति धेरै डाटा को बारे मा चिन्ता नगर्नुहोस्, यी बट्स के हो के बाट शुरू गरौं।
1 कसरी बट्स टेलिग्राम मा श्रृंखला डाउनलोड गर्न को लागी काम गर्दछ?
2 कसरी टेलिग्राम मा श्रृंखला डाउनलोड गर्न एक च्यानल मा सामेल हुन?
2.1 म कसरी फिल्महरु वा श्रृंखला छ कि म मेरो मोबाइल फोन मा टेलीग्राम बाट डाउनलोड पाउन सक्छु?
कसरी बट्स टेलिग्राम मा श्रृंखला डाउनलोड गर्न को लागी काम गर्दछ?
तपाइँलाई विचार दिन को लागी, उनीहरु बाकी बट्स बाट फरक छैन कि टेलीग्राम मा वा Discord जस्तै अन्य कार्यक्रमहरुमा हुन सक्छ। तिनीहरू बट्स हुन् कि एउटै टेलीग्राम अनुप्रयोग भित्र काम गर्दछन् र उनीहरुको उद्देश्य केहि पनी केहि डाटा बताउन को लागी केहि छैन एक व्यक्ति द्वारा preconfigured, उदाहरण को लागी, तपाइँ एक निश्चित समय मा हरेक दिन समय बताउनुहोस् वा हामीलाई के चासो, केहि डाउनलोड गर्न को लागी। तर यो हो कि उनीहरु मात्र श्रृंखला होईन, यो संगीत पनि हुन सक्छ जस्तै हामीले भन्यौं वा चलचित्रहरु। वैधानिकता यसको अनुपस्थिति द्वारा स्पष्ट छ, ध्यान राख्नुहोस् कि यो तपाइँको जिम्मेवारी हो।
प्रक्रिया हो कि एक बोट निम्नानुसार छ र कि तपाइँ जान्न को लागी निम्नानुसार छ:
सुरु गर्न को लागी तपाइँ कुन बोट को बारे मा तपाइँ चाहानुहुन्छ वा स्पष्ट हुनु पर्छ एउटा लिंक को उपयोग गर्नुहोस् कि तपाइँ त्यो बोट को लागी इन्टरनेट मा पाउनुहुन्छ। अब तपाइँ स्टार्ट मा क्लिक गर्नु पर्छ जब तपाइँ बोट संग कुराकानी खोल्नुहुन्छ। यस पछि, तपाइँ यसको आदेशहरु को उपयोग गर्नु पर्छ कि यो संकेत गर्दछ वा कहिले काहि सर्वेक्षणहरु लाई खोल्छ र तपाइँ निर्देशनहरु को पालन गर्न को लागी तपाइँको रहर को प्रतिक्रिया दिनेछ। अन्तमा, तपाइँ सूची बाट च्याट हटाउन सक्नुहुन्छ जब तपाइँ यसलाई अब प्रयोग गर्न को लागी महसुस गर्नुहुन्न।
दिमागमा राख्नुहोस् कि यदि तपाइँ उनीसंग कुरा गर्नुहुन्छ, उसले तपाइँलाई जवाफ दिनेछैन, उहाँ उसको पछाडि बोल्ने व्यक्ति हुनुहुन्न, यो तपाइँलाई केहि चीजहरु दिनको लागी प्रोग्राम गरिएको एक बोट हो। तिनीहरू बिल्कुल स्वतन्त्र छन् र तपाइँसँग एक बोट सीमा स्थापना वा टेलिग्राम मा कन्फिगर गरिएको छैन। मात्र जब तपाइँ थकित हुनुहुन्छ तपाइँ मेटाउनुहुन्छ र तपाइँ अब बोट कन्फिगर गरिएको हुनुहुन्न। अब हामी तपाइँलाई बताउन जाँदैछौं कि कसरी डाउनलोड बट्स संग ती च्यानलहरुमा सामेल हुन।
कसरी टेलिग्राम मा श्रृंखला डाउनलोड गर्न एक च्यानल मा सामेल हुन?
यो धेरै सरल छ र हामी तपाइँलाई बिभिन्न च्यानल नामहरु दिनेछौं कि तपाइँ आफैं टेलीग्राम मा खोज्न सक्नुहुन्छ र चिन्ता बिना सामेल हुन सक्नुहुन्छ। एक पटक तपाइँ अनुप्रयोग स्थापना, तपाइँ पहिले नै यो छैन भने, तपाइँ खोज इन्जिन मा जानुहोस् र प्रविष्ट गर्नुहोस् च्यानलहरु को नामहरु कि हामी यहाँ तल राख्नेछौं च्यानलमा सामेल हुन सक्षम हुन। अब छैन।
चलचित्र x गुगल ड्राइव ल्याटिनो
डेल प्ले फिल्म
डेल चलचित्र खेल्छन्
Zuby श्रृंखला पपकोर्न
हामी सिफारिश गर्दछौं कि एक पटक तपाइँ च्यानल मा सामेल हुनुहोस्, किनकि यदि तपाइँ टेलिग्राम मा हरेक दिन लगातार सूचनाहरु को लागी जाँदै हुनुहुन्न र यो केहि छ कि, हाम्रो अनुभव मा, कष्टप्रद छ। तपाइँ यी च्यानलहरुमा प्रवेश गरेर बोर हुनुहुन्न किनभने उनीहरु दैनिक समाचार अपलोड गर्छन्। यदि तपाइँ दिमाग मा एक श्रृंखला वा फिल्म छ कि तपाइँ हेर्न चाहानुहुन्छ, तपाइँ सधैं हेर्न को लागी यो पहिले नै च्यानल को लागी बोट को लागी अपलोड गरीएको छ की कोशिश गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागी तपाइँ खोज इन्जिन आफैं प्रयोग गरी खोज्न र नाम प्रविष्ट गर्न वा अपलोड फाइलहरु खोज इन्जिन मा प्रश्न मा फाइल को लागी खोज्न को लागी हुनेछ।
यो कती सजिलो छ, साँच्चै। केवल च्यानल मा सामेल गरेर र सामग्री डाउनलोड गर्न को लागी एक पटक तपाइँ खोज र यो भेट्टाउनुभयो, तपाइँ टेलिग्राम मा श्रृंखला हेर्न को लागी सक्षम हुनुहुनेछ। र पनी फिल्महरु, किनकि हामीले च्यानलहरु लाई जोड्छौं जो उनीहरुलाई देखाउँछन्। यदि तपाइँ डाउनलोड गरीसके पछि तपाइँ कुनै प्रश्न छ, हामी तपाइँलाई एक सानो सुझाव दिन जाँदैछौं। यो केहि को लागी होईन, यो हो कि हामीले देखेका छौं कि यो टेलीग्राम मा श्रृंखला को डाउनलोड मा दोहोरिने केहि छ।
म कसरी फिल्महरु वा श्रृंखला छ कि म मेरो मोबाइल फोन मा टेलीग्राम बाट डाउनलोड पाउन सक्छु?
किनकि यो हो, टेलिग्राम कहिल्यै बचत गर्दैन के पूर्वनिर्धारित द्वारा डाउनलोड गरीएको छ। तपाइँ यसलाई सबै च्यानलहरुमा म्यानुअल रूपमा गर्न को लागी छ। र यसको लागी हामी तपाइँलाई छिटो यो व्याख्या गर्न जाँदैछौं, चिन्ता नगर्नुहोस् कि M Forumvil फोरममा हामी अन्त्य सम्म तपाइँलाई मद्दत गर्नेछौं।
सुरु गर्न को लागी, त्यो चलचित्र वा टेलीग्राम मा श्रृंखला को लागी हेर्नुहोस् कि तपाइँ हेर्न चाहानुहुन्छ। अब जब तपाइँ यो स्थित छ, यो डाउनलोड गर्न सुरु गर्नुहोस् (याद गर्नुहोस् कि तपाइँ कुराकानी फाइल ब्राउजरमा जानुहोस् वा लिखित नाम द्वारा खोजी)। अब तपाइँ गर्नु पर्छ तीन डटहरु संग तपाइँ सामान्यतया मेनु मा जानुहोस् कि तपाइँ फिल्म डाउनलोड को माथिल्लो दाहिने कुनामा स्थित छ, उपकरण र विकल्प को विशिष्ट मेनू, तपाइँलाई थाहा छ। अब डाउनलोड मा बचत गर्न को लागी विकल्प मा क्लिक गर्नुहोस् ताकि तपाइँको फोनले त्यो फिल्म लाई यसको आफ्नै भण्डारण को डाउनलोड फोल्डर मा बचाउँछ। र एक अन्तिम चरण को रूप मा, सबै बाँकी छ कि फाइल प्रबन्धक, अब आन्तरिक भण्डारण खोल्न र त्यसपछि डाउनलोड फोल्डर पहुँच छ।
तेसैले, यो यो हुनेछ, तपाइँ पहिले नै अवस्थित छ र फिल्म वा टेलीग्राम श्रृंखला को फाइल लाई डाउनलोड गरीएको छ ताकि कुनै पनी समय तपाइँ यसलाई हेर्नु जस्तै लाग्छ। यसको अतिरिक्त र जानकारी को एक अतिरिक्त टुक्रा को रूप मा, तपाइँ अजीब च्यानल भर मा आउन सक्नुहुन्छ कि न केवल डाउनलोड लिंक प्रकाशित गर्दछ, तर यो पनि अनलाइन हेर्न को लागी लिंक छ। यही कारणले तपाइँ डराउनु हुँदैन, यो अर्को विकल्प हो। यी च्यानलहरु सामान्यतया पनि अन्य विकल्प छ, त्यो हो, डाउनलोड हावी छ तर कहिलेकाहिँ त्यहाँ अनलाइन हेर्ने छ।
हामी आशा गर्दछौं कि यो लेख उपयोगी भएको छ र अब बाट तपाइँ जान्नुहुन्छ कि कसरी टेलीग्राम श्रृंखला र फिल्महरु जाँदैछन् ताकि यो तपाइँलाई पास गर्न मा समात्न छैन। अर्को मोबाइल फोरम लेख मा भेटौंला।
लेखको पूर्ण मार्ग: मोबाइल फोरम » सामाजिक सञ्जालहरू » तार » तपाइँ कसरी टेलीग्राम बाट मुक्त श्रृंखला डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ
ईथरनेट एक मान्य आईपी कन्फिगरेसन छैन: के गर्ने?